घरका एक्लो छोरा थिए उनि , कठै ! जापान गएर आमालाई सुख दिने सपना अधुरै रह्यो ….(भिडियो हेर्नुहोस) – Dainik Sangalo
घरका एक्लो छोरा थिए उनि , कठै ! जापान गएर आमालाई सुख दिने सपना अधुरै रह्यो ….(भिडियो हेर्नुहोस)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष ०६, २०७८ समय: १६:४३:५३
घ’टना हो दाङको घोराही बजारमा रहेको फ्रेन्डस् एण्ड फेमिली होटेलको। मङ्सिर १५ गते गणेशको साथी नबिन गिरीको जन्म दिन फ्रेन्डस् एण्ड फेमिली होटेलमा मनाईएको थियो। जन्मदिन मनाईसकेपछि झण्डै 11 देखि 15 जना जति साथीहरू त्यसरात सोही होटेलमा सुतेका थिए। केहि साथीहरू र होटेल सञ्चालकले गणेशको परिवारलाई भने अनुसार एका बिहानै झण्डै ४ बजे तिर गणेशलाई अचेत अबस्थामा भुईमा प’ल्टिरहेको देखेका थिए।
भुईमा प’ल्टिएका गणेशलाई केहि साथी र होटेल सञ्चालकले रक्सि छुटाउन भन्दै पानीले रूजाएका थिए र त्यसपछि कोठामा लगेर सुताएका थिए। अस्पताल सम्म पुर्याउदा झन्डै दिउसोँको २ बजेको थियो। गणेशको अबस्था झनै जटिल बन्दै गएपछि उनलाई भैरहवा सम्म त लगियो तर जादाँ जादै बिच बाटो मै गणेशको मृ’त्यु भयो। गणेशको परिवार र आफन्तीहरू यो घ’टनालाई सहजै स्विकार गर्न तयार छैनन्। मृ’तकको परिवारले घ’टना सं’कास्पद भएको भन्दै प्र’हरी कार्यालयमा कि’टानी जाहेरी समेत दिएको छ।
जाहेरीको आधारमा होटेल संचालक सहित होटेलमै सुतेका झण्डै ११,१२ जना लाई प’क्राउ गर्दै घ’टना बारेमा अनुसन्धान भईरहेको प्र’हरीले जानकारी दिएकोछ । गणेशको टाउको को केहि भागमा चो’ट लागेको थियो। यो कसरी भयो भनेर सोध्दा होटल सञ्चालकले जबाफ दिएका रहेछन् माथीबाट खसेर लागेको हुनसक्छ तर मृ’तकको परिवार यो सबै मान्न तयार छैन। मृ’तक गणेशको परिवार भन्छ यदि साच्चीकै ख’सेर चो’ट लागेको भए किन समयमै अस्पताल लगिएन?
किन परिवारलाई र प्र’हरीलाई खबर गरिएन? गणेशले हार्डवयर पसलमा काम गर्थे, पसल बन्द नहुदै आईपुग्छु भनेर गएका गणेश अर्को दिन दिउसोँ १ बजे सम्म पनि नआएपछि र मोबाईल अफ भईरहेपछि पसले दाईले गणेशको परिवारलाई फोन गरि सोधे । गणेशलाई अचे’त अबस्थामा देख्दा समेत पनि किन सगै सुतेका साथीहरूले परिवारलाई खबर गरेनन् ? टाउकोमा चो’ट देख्दा समेत पनि होटेल सञ्चालकले किन अस्पताल सम्म पुराएनन् ?
किन प्र’हरीलाई समयमै खबर गरिएन ? हो यिनै कुराहरूले घ’टना सङ्कास्पद छ भनिनहेकाछन् मृ’तकका आफन्तहरू । घ’टनाबारे अनुन्धान गरिरहेको नेपाल प्र’हरीले छिट्टै सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याने कुरामा हामी बिश्वस्त छौँ रिवारलाई लागेको थियो छोरो पसलमै बसेको होला भन्ने तर पसलबाटै छोराको बारेमा सोध्दा, झनै गणेशको परिवार आ’तिन थाल्यो ।दिउसोँको झन्डै २ बजे तिर सङ्का लागेका ठाउँहरूमा गणेशलाई खोज्दै जादा जन्म दिन मनाएकै होटेलमा गणेशलाई अ’चेत अबस्थामा फेला पारे।छोरोलाई त्यो अबस्थामा देखेर गणेशको परिवार आत्तिन थाल्यो र हत्तपत्त नजिकै रहेको अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगियो। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Last Updated on: December 21st, 2021 at 4:43 pm